I-Perfume Bottle Evolution: Amafutha afanayo, indlela eyahlukileyo yokuvula
Ngentsomi yamandulo kunye nentsomi ngokubanzi, iziqholo nazo zinembali engaqondakaliyo kunye nembali ende. Iimbali ezinde ziye zaba nzima ukuqinisekisa ixesha, kwaye indlela yokusebenzisa iziqholo itshintshile ngenkqubela phambili kwezobuchwephesha.
Utshintsho lokusetyenziswa kwesiqholo:
Sisiqhumiso esisuka kwisiLatini nge-fumum, esithetha ukuthi "ngomsi" .Owona mafutha oqobo ayenziwa ngokutshisa inkungu yesiqhumiso, isetyenziselwa ukunqula oothixo, ibonisa into engcwele nengaphephekiyo.
Enye yezona zinto zibalulekileyo kwimbali yeziqholo, okwangoku, yaphucula kakhulu inkqubo yokukhutshwa kwesiqholo, imveliso yeziqholo yanda, kwaye ukusetyenziswa kwesiqholo bekungasaphelelanga kusapho lwasebukhosini. Kwiibhotile zeziqholo, iikhokho zazisetyenziswa njengezinto zokumisa ukunqanda iphunga ukuba lingabaleki, kwaye intonga yesiphumo yayisetyenziselwa ukudipha isiqholo esihlahleni nasentanyeni.
Phambi kokufika kweebhotile zokutshiza, abalandeli babedla ngokusetyenziselwa ukutshiza iziqholo, ukulahla iziqholo kwifeni ukukhupha ivumba ngexesha lokusetyenziswa, kwaye iphepha le fan fan liyinto ekhethekileyo, elungele kakhulu ukufunxa isiqholo, lingenza ivumba elimnandi kwi fan Ukusukela ukufika kwezitshizi zeziqholo, abalandeli baye baba zizixhobo zokubonisa kwiivenkile zeziqholo.
Ngo-1907 ukuzalwa kweziqhumisi zokuqala ("iziqholo zeziqholo") yinto yokuqala ebalulekileyo ekusebenziseni iziqholo. Ijika isiqhumiso esingamanzi sibe ngamasuntswana amancinci kwaye sifefe ngohlobo lwesitshizi esivela kwintloko yokufefa. yavelisa ishishini elitsha, abavelisi benza iibhotile ezingenanto, zokuhombisa ezikhuthaza abantu ukuba bagcine iziqholo zabo abazithandayo ixesha elide kangangoko kunokwenzeka
5.Ummangaliso kunye neAtaror kwiminyaka ye-1930
I-atomizer yesiqholo yeli xesha ineentlobo ezimbini zentloko yokuchela, into ebonakala ngaphambili sisiqholo se-airbag spray, cinezela ibhotile yesithambiso ukuze uthathe i-airbag ngobunono xa usebenzisa, unokutshiza inkungu emnandi.
6. Enye yeebhotile zeziqholo ezaziwa kakhulu ngo-1907
Ukufika kokucinezelwa kwezitshizi kuye kwenza ukuba ixesha lokugcina iziqholo lihlale liqinile. Ukuza kuthi ga ngoku, uninzi lweziqholo kukusebenzisa intloko yokufafaza intloko, ukutshiza iziqholo ngentloko yokufafaza.
7. Le Sien, Amour-Amour kunye neQue Sais-Je1925-1928
Ukutsala amehlo abathengi, abavelisi basebenze nzima kuyilo kunye nokupakishwa kweebhotile zeziqholo. UCoty ugalele isiqhumiso kwiglasi yezihlangu ezinesithende, nto leyo intle kwaye intle. Ibhotile nganye yaseMarotte inemilo eyahlukileyo yomnqwazi, i-chic kunye nobuntwana obunobutyebi; Uyilo lwebhotile lweShalalimar luphefumlelwe ngumthombo wegadi waseShalalimar. soloko utsala umdla wabasetyhini ngexesha lokuqala.
I-COMI AROMA – ikunika iintlobo zeebhotile zeglasi zeziqholo, izinto zeglasi zeqhwitha eziphezulu, ziyenze ngcono i-perfume yakho
Ixesha leposi: Dec-25-2020
Ithetha ntoni ilebheli kwibhotile yesiqholo ...
I-Perfume yeBhotile yoGuquko: Amafutha afanayo, d ...